သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို Semalt နဲ့ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ။
1. Semalt မှ "ပြိုင်ဘက်" ကဘာလဲ?
ပြိုင်ဘက်များ၏အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုသနည်း။
တိုက်ရိုက်ဥပမာဖြင့် Semalt မှ "ပြိုင်ဘက်" ကိုနားလည်ခြင်း
ဒါဟာပိုမိုလွယ်ကူပုံရသည်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသည်အရာများစွာကိုရိုးရှင်းစေသော်လည်းသင်၏ပြိုင်ဘက်များအထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာတွင်အောင်မြင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမဟာဗျူဟာများလိုအပ်နေသေးသည်။
ကောင်းပြီ, သင်ကဲ့သို့တော်လှန်ရေးသမားဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများမှကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ် Semaltသင်၏ပြိုင်ဘက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့ရှေ့တွင်အောင်မြင်ရန်နည်းဗျူဟာများပြုလုပ်ရန်အခမဲ့ကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ယနေ့ဤဆောင်းပါးသည် Semalt's ၏အကူအညီဖြင့်သင်၏အွန်လိုင်းပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမည်သို့ကျော်လွန်နိုင်မည်ကိုလေ့လာရန်ကူညီလိမ့်မည် ပြိုင်ဖက်။
Semalt မှ "ပြိုင်ဘက်များ" ကဘာလဲ?
သင် "ပြိုင်ဘက်များ" သည် Semalt မှထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်ခန့်မှန်းနေလျှင်သင်မှန်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပြိုင်ဖက်များကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းကိုဂူဂဲလ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များထက်သာလွန်စေရန်မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရာတွင်ကူညီရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကိရိယာသည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသောအဆင့်မြင့်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်ဂူဂဲလ် SERPs (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများ) တွင်အဆင့်မြင့်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ရန်ကူညီပေးသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များအကြားသင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အနေအထားကိုဖော်ထုတ်ရန်လည်း၎င်းကကူညီသည်။
Semalt မှပေးသောအခြားကမ်းလှမ်းမှုများနည်းတူဤ tool သည်အသုံးပြုရန်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းလက်လှမ်းမီသည်။ ဒီအသုံးဝင်သောကိရိယာဖြင့်စတင်ရန်ရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုကြည့်ကြပါစို့။
အဆင့် ၁: သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ရိုက်ပါ semalt.net လိပ်စာဘား၌တည်၏။ Semalt's ၏ပင်မစာမျက်နှာသို့သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည် စီးပွားရေးအတွက်အားကောင်းသော SEO ကိရိယာများ။
အဆင့် ၂: သင်၏ cursor ကိုဘယ်ဘက်ဘောင်သို့ရွှေ့။ အပေါ်ကိုနှိပ်ပါ ပြိုင်ဖက်။
အဆင့် ၃: ဘယ်အချိန်မှာ ပြိုင်ဖက် tool ပွင့်လာပြီး၊ သင့် website ၏ URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ (ဒိုမိန်း) နှင့်ရွေးပါ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် အနည်းဆုံးသော့ချက်စာလုံးတလုံးအတွက်သင့်ရဲ့ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပြီးသားနေရာ။
ပုံမှန်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် google.com (အားလုံး) -International, ဒါပေမယ့်သင်ကသင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ဒေသအရသိရသည်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အဆင့် ၄: ကိုနှိပ်ပါ လျှောက်ထားပါနှင့်သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ရှေ့မှောက်၌အဘို့လိုအပ်သောအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။
ပြိုင်ဘက်များ၏အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ကြောင့်ပိုမိုလေ့လာရမည်နည်း။
ပြိုင်ဘက်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်ဟုအချို့ကစဉ်းစားနေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မှာနေထိုင်နေကြတယ်။ ခိုင်မာသောအွန်လိုင်းရှိနေခြင်းဟာအောင်မြင်မှုနှင့်ညီမျှသည်။
၀ ယ်သူအများစုသည် ၀ ယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ဂူးဂဲလ်မှထုတ်ကုန်များ (သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ) နှင့်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရှာဖွေကြသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ထုတ်ကုန်/၀ န်ဆောင်မှုသည်ဂူဂဲလ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အဆင့်မြင့်မည်ဆိုပါကသူတို့အွန်လိုင်းတွင်ဘာကြောင့်ပိုကောင်းသည်ကိုလေ့လာခြင်းကသင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏အွန်လိုင်းအလေ့အကျင့်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သူတို့မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်မည်သည့်အမှားများကျူးလွန်နေသည်ကိုဖော်ပြသည်။ သင်ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်စိတ်ကူးရလိမ့်မည်။
ဤကိရိယာကိုပိုမိုနားလည်ရန်အတွက်၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုတိုက်ရိုက်ဥပမာတစ်ခုဖြင့်မြင်ရမည်။ ကျနော်တို့အကဲဖြတ်သွားကြသည်ဒိုမိန်းဖြစ်ပါတယ် semalt.com။ ကျွန်ုပ်တို့ရွေးမည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည် - google.com (အားလုံး) -International။
ဤအစီရင်ခံစာသည်သင့်အားအသုံးဝင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှု (၃) ခုကိုသင့်အားပေးမည်။
Google TOP ၌ပြိုင်ဘက်များ
ဤကဏ္ section သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏သော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်နှင့်သင်၏ထိပ်ဆုံး ၅၁ ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သော Google SERP (ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်များစာမျက်နှာ) တွင်အချက်အလက်များပေးသည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်လက်ရှိနေ့စွဲ၏ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁ မှ ၁၀၀ အတွင်းရှိသော့ချက်စာလုံးများအရေအတွက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမျှဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးများသည်မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤအခန်းတွင်လုပ်ကွက် (၆) ခုပါ ၀ င်သည် semalt.com, နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတစ်ခုချင်းစီကို TOP မှာ shared သော့ချက်စာလုံးများစုစုပေါင်းပါရှိသည်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလေးစားမှုနှင့်အတူသူတို့ကိုအတွက်တိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့နည်းစေနိုင်သည် ဒါဟာအောက်ပါဖော်ပြသည်
ယနေ့တွင်ဝေမျှထားသောသော့ချက်စာလုံး ၂၈၀၇၂ သည်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁ နေရာတွင်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအရေအတွက်သည် ၁၉၆၃၃ သို့လျော့နည်းသွားသည်။
ယနေ့ ၆၀,၃၉၈ မျှသောသော့ချက်စာလုံးများသည်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၃ ခုတွင်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအရေအတွက်သည် ၅၆၁၁၀ သို့လျော့နည်းသွားသည်။
ယနေ့ ၁,၇၁၅၄၀ မျှသောသော့ချက်စာလုံးများသည်ထိပ်ဆုံးနေရာ ၁၀ ခုတွင်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအရေအတွက်ကို ၁,၉၇၃၃၉ အထိလျော့နည်းသွားသည်။
ယနေ့၊ ၇၈၂,၅၂၅ မျှဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးများသည်ထိပ်ဆုံးရာ ၁၀၀ တွင်ရှိသည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဤအရေအတွက်ကို ၁၃,၅၆,၆၀၀ လျှော့ချသည်။
ဒီဇယားထဲကလိုင်းငါးခုကမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ငါးယောက်ပါ။ သင်သည်ဤလိုင်းများပေါ်တွင် cursor ကိုထည့်လိုက်သည်နှင့်နေ့စွဲတစ်ခုတွင်မျှဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးများအချက်အလက်ပေါ်လာမည်။ အတွက်မျှဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သတင်းအချက်အလက် semalt.com 2021 ဇန်နဝါရီလ 25 ရက်နေ့တွင်
issuu.com မှသော့ချက်စာလုံး ၅၂,၉၃၄ သည် TOP100 တွင်ရှိသည်
facebook.com မှသော့ချက်စာလုံးပေါင်း ၃၇,၇၉၄ သည်ထိပ်တန်း ၁၀၀ တွင်ရှိသည်
researchgate.net မှသော့ချက်စာလုံး ၃၇,၂၃၈ သည်ထိပ်တန်း ၁၀၀ တွင်ရှိသည်
youtube.com မှသော့ချက်စာလုံးပေါင်း ၃၅၅၁၅ သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ တွင်ရှိသည်
twitter.com မှသော့ချက်စာလုံးရေ ၂၅,၈၄၃ သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ တွင်ရှိသည်
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ (နောက်လာမည့်အပိုင်းတွင်) စာရင်းမှပထမဆုံးပြိုင်ဘက် ၅ ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးဖြစ်သည်။ မည်သည့်ငါးလုံးကိုမဆိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤအပိုင်းသည်သင်ရရှိနိုင်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကို TOP 1, TOP 3, TOP 10, TOP 30, TOP 50 နှင့် TOP 100 ရာထူးများတွင်ရှာဖွေပေးသည်။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ dropdown menu မှသင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဤကဏ္ section သည်ဇယားကွက်ပုံစံဖြစ်ပြီးသင်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Google TOP တွင်ခွဲဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးများအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်စွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကမျှဝေထားသောသော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်ကွဲပြားမှုကိုခြေရာခံရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အဘို့ semalt.comဤအပိုင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
ဤဇယားတွင် semalt.com ၏ပြိုင်ဘက် ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၅၁ ခုနှင့် Google TOP 100 တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်ပါဝင်သည်။ ဤအပိုင်း၏အဓိကပေါ်လွင်ချက်များမှာ -
သင်၏ပြိုင်ဘက် ၀ က်ဘ်ဆိုက် (၅) ခုထဲမှတစ်ခုကိုစာရင်းမှသင် ရွေးချယ်၍ ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်း (Shared Keywords Dynamics) တွင်ဝေမျှထားသောသော့ချက်စာလုံးများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကြည့်နိုင်သည်။
ပြိုင်ဘက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်စာရင်းကိုဒိုမိန်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်ယင်း၏အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်စစ်ထုတ်ရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ သင်သည် Google 1 ၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်၊ 1၊ TOP 3, TOP 10 စသည်ဖြင့်ထပ်မံရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေမှုအမှတ်အသားကိုနှိပ်လိုက်ရင်၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှာဂူဂဲလ် TOP 100 တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများကိုပြလိမ့်မယ်။
ဂူဂဲလ်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်၏ပြိုင်ဘက်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အဓိကသော့ချက်စာလုံးအရေအတွက်နှင့်ကွဲပြားမှုကိုရှာဖွေရန် (ရက်စွဲအတန်းများ) ဇယားရှိနောက်ဆုံးကော်လံနှစ်ခုကသင့်အားကူညီသည်။
အစီရင်ခံစာအပြည့်အစုံသို့မဟုတ်ပြိုင်ဘက်များစာရင်းကို PDF သို့မဟုတ် CSV ပုံစံများဖြင့်လည်း download ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Google Drive သို့တင်ပို့လိုပါက၎င်းအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များအကြောင်းဤအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်၏ပြိုင်ဘက်များဖြစ်သောဂူဂဲလ်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များထက်သာလွန်စေရန်အသုံးချနိုင်သည် များစွာသောဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးဆပ်ရန်ကြီးမားသောအခကြေးငွေများကိုကောက်ခံသော်လည်း Semalt ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကိုသင်အမြဲသတိထားသင့်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပြုသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတွင်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏အဆင့်တိုင်းကိုသိရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်သင်၏ပြိုင်ဘက်များ၏နည်းဗျူဟာများ/ချဉ်းကပ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသည်အွန်လိုင်းကမ္ဘာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည် Semalt နှင့်အခြားသူများ။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုရှိသူအသစ်များသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်သော့ချက်စာလုံးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်များစွာအကျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်သူတို့ကို SEO မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
ဂူးဂဲလ်၏နောက်ဆုံးပေါ် SEO ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းများနှင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုသိလိုသူများသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာကမည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများသည်၎င်းတို့အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိရန်ကူညီပေးနေသည်ကိုလည်းဖော်ပြသည်။
ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များအပေါ်သူတို့၏လက်ရှိအဆင့်မြင့်မှု (သို့) အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုစိုးရိမ်သောသူများ။ ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကသူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်များ၏သော့ချက်စာလုံးများနှင့် SEO လှုပ်ရှားမှုများကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။
ပြိုင်ဖက် from Semalt သည်သင်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များကဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်အဆင့်မြင့်ရန်အသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပြိုင်ဘက်ဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုကိုနားလည်ပြီးနည်းဗျူဟာများချမှတ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤကိရိယာသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်သာလွန်သည်။
သို့သော် Semalt မှ SEO ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ထိတွေ့ပါက Google အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုရလဒ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်သာလွန်သောပြိုင်ဘက်များသည်အလွန်လျင်မြန်နိုင်သည်။